4 Qof Shaqaale Hay'adeed Ah oo Ku Dhintay Qarax ka Dhacay Gudaha Dalka Kenya.
Wararka ka imaanaya dhulka Soomaalida NFD ee Kenya gumeysato ayaa sheegaya in qarax khasaara dhaliyay uu ka dhacay deegaano hoos yimaad degmada Gaarisa.
Ugu yaraan Afar qof oo u shaqeynayay hay’ad gargaar ayaa la sheegay in ay ku dhinteen qarax qabsaday gaari ka amba baxay Gaarisa kunasii jeeday degmada Dhoobleey ee kulaasha Xadbeenaadka ay wadaagaan Kenya iyo Soomaaliya.
Saraakiil u hadashay Booliska Kenya ayaa sheegay in miino dhulka lagu aasay ay ku qaraxday gaari ay la socdeen shaqaale katirsan hay’adda ADESO oo ka howlgasha wadamo ay kamid yihiin Soomaaliya, Suudaan iyo Kenya.
Qaraxa ayaa ka dhacay inta u dhaxaysa deegaanada Kulan iyo Libooya, sawirro lagu baahiyay baraha internetka ayaa muujinayay burbur xooggan oo gaaray gaariga la qarxiyay iyo meydadka shaqaalaha oo dhulka daadsan.
Bishii lasoo dhaafay ayay xarakada Al Shabaab weeraradii ugu badnaa ka geysatay gudaha dalka Kenya waxaana weeraradaasi ku dhintay askar iyo saraakiil katirsan booliska xukuumadda Na’irobi ee qeybta ka ah duullaanka lagusoo qaaday dalka Soomaaliya.